Fanatanjahantena malagasy Fomba malagasy Haiady malagasy Haisoratra malagasy Lalao malagasy Mozika malagasy Mpanakanto malagasy Mpanao sary sikotra malagasy Mpanao tantara an-tsary malagasy Sakafo malagasy
Ny kolontsaina dia ny fitambaranny fomban ny vahoaka ao amin ny foko na faritra na firenena na kôntinenta iray. Ny siansa mandinika ny kolontsaina dia ny antrôpôlôjia sady siansa ara-tsosialy.
Azo ho sokajiana toa ireto manaraka ireto ny firafitry ny governemanta Malagasy taorianny fidiranny vazaha. Isaky ny sokajy dia nahitana governemanta iray na maro.
Ny Jiosy malagasy na Jody malagasy dia misy karazany roa: dia ireo Malagasy mihevitra fa manam-piaviana jiosy sy ireo Malagasy niva finoana ho amin ny jodaisma. Maro tokoa ny Malagasy lazaina fa avy amin ny Jiosy.
Ny Alakamisy dia andro fahefatra ao aminny herinandro raha ny Alatsinainy no andro voalohany fa andro fahadimy kosa raha ny Alahady no andro voalohany. Andro voalohany ny Alakamisy ho anny Malagasy mandala ny nentin-drazana tsy mandray ny Alatsinainy na ny Alahady ho andro voalohany aminny herinandro. Ny Malagasy talohanny fidiranny kolontsaina arabo sy ny kolontsaina tandrefana dia nisy nanao ny Alakamisy ho andro voalohany aminny herinandro. Ny teny malagasy hoe Alakamisy na Lakamisy na Kamisy dia avy aminny teny arabo hoe الخميس / al-khamīs izay midika hoe "andro fahadimy".
I Madagasikara dia manana faritany enina: Faritanini Mahajanga, FaritaninAntsiranana, FaritaninAntananarivo, Faritanini Toamasina, Faritanini Fianarantsoa, Faritanini Toliara. Ankehitriny dia nozaraina ho faritra 22 ireo faritany ireo:
Ny fanagasiana koa dia pôlitika nentinny governemanta malagasy taorianny rotaky ny mpianatra taminny 1972 ary taty aoriana nandritry ny fanomezan-dalanny filoham-pirenena Marc Ravalomanana faharoa taminny taona 2007. Ny fanagasiana indrindraindrindra dia mikasika ny fampianarana satria araka ny dinika nataonny Firenena Mikambana, moramora kokoa ho anny ankizy no mianatra aminny teny nibeazany.
Ny dahalo na malaso dia mpangalatra, indrindra fa ny omby. Any aminny faritra atsimonny Nosy no ahitana asan-dahalo na malaso betsaka sy mahery vaika indrindra eto Madagasikara: Ihosy, Betroka, Isoanala, Beraketa, Beroroha, Ilakaka, Ranohira, ary Amboasary Atsimo.
Ny fitampoha dia fampandroana ireo sisan-javatra avy aminny vatanny mpanjaka efa maty, izay tanterahinny Malagasy sakalava any aminny faritra Menabe, isaky ny dimy taona mandritra ny fito andro, mba hahatsiarovana ireo mpanjaka sakalava.
Ny teny hoe hasina dia manana heviny maro: Sira Hasina Zavatra voatokana Hasina Fizarazaràna Hasina Hery tsy hita maso Hasina Hazo Hasina Fanomezana Hasina
Ny lamba dia fitafy nentindrazana fahita aminny faritra maro eto Madagasikara. Misy karazany maro araky ny akora nanamboarana azy sy ny didiny ny lamba.